Zvinyorwa na Abhay Singhal
Abhay ndiye mubatanidzwa uye CRO we InMobi. Abhay anotaura pasirese nezve zvemabhizimusi, vanhu, uye tsika uye zvakabatsira mukuwana InMobi kuzivikanwa senge Makambani Makumi makumi mashanu Anokanganisa pasi rese neMIT Technology Ongororo, Inotangisa yekutanga yegore mubairo weForbes uye nezvimwe zvakawanda. Kuda kwake hunyanzvi kwakamuendesa kuIndia Institute of Technology, Kanpur (IIT) kune ma bachelors ake mu50 akaremekedzwawo neakakudzwa 'Anokosha Alumnus Award' nekugona kwake mukuita bhizinesi.
Maitiro Ekunze Kwevatengesi Anobudirira muChina
China, Kukadzi 23, 2017 China, Kukadzi 23, 2017 Abhay Singhal
Mu2016, China yaive imwe yemisika yakaoma kunzwisisa, inonakidza uye yakabatana padhijitari, asi nyika painoramba ichibatana, mikana muChina inogona kuwanika kumakambani epasi rese. App Annie nguva pfupi yadarika akaburitsa mushumo pamusoro pechisimba chemafoni, achijekesa China seimwe yevatyairi vakakura mukukura mune mari yechitoro. Zvichakadaro, Iyo Cyberspace Administration yeChina yakaraira kuti zvitoro zveapp zvinofanirwa kunyoresa kuhurumende ku